ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ www.mrt.gov.mm
ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ ဆောင်ရွက်မှုများ	ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ ပြင်ပယာဉ်မောင်း / ယာဉ်ပြင်သင်တန်း
ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းကာလ (၁)လဖြင့် ယာဉ်ကြီးများ (ဒေါင်ဖန်း၊ ကေအမ်ယာဉ်)၊ စက်မှုဇုံထုတ်ဂျစ်ကားများ မောင်းနှင်နိုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို သင်တန်းဆင်းပြီး ၃-လအတွင်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အသက်အရွယ်မရွေး၊ ကျား မ မရွေး တက်ရောက်ခွင့်ရှိပါသည်။
သင်တန်းကြေးမှာ တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၆၀၅၀၀ိ/- နှင့် အိပ်ဆောင်ကြေးအခမဲ့၊စားစရိတ် ကျပ် ၄၂၀၀၀ိ/- နှုန်းဖြင့် အထူးဈေးနှုန်းချိုသာစွာ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်လက်တွေ့မောင်းနှင်နည်းအပြင် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများကိုပါ စနစ်တကျသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
(၁) နှစ်လျှင် (၁၀) ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး ၊ သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်များကို သတင်းစာ ၊ မဂ္ဂဇင်းတို့မှ လစဉ် ဖော်ပြပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပြင်ပယာဉ်ပြင်သင်တန်းကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်တန်းကာလ (၂)လဖြင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
(၁)နှစ်လျှင် (၄)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အတွှေ့အကြုံရင့်ကျက်သော နည်းပြများဖြင့် စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
သင်တန်းကြေးမှာ တစ်ဦးလျင် ကျပ် ၁၅၀၀၀ိ/- နှင့် အိပ်ဆောင်ကြေး အခမဲ့၊ စားစရိတ် ကျပ် ၈၄၀၀၀ိ/- နှုန်းဖြင့် စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပြင်ပယာဉ်မောင်း/ ယာဉ်ပြင်သင်တန်းများကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမောင်မောင်နိုင်လက်ထက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၂။ ပြင်ပယာဉ်မောင်း/ ယာဉ်ပြင်သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီတွင် ဤကျောင်းရှိ၏၀န်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ် ခွင့် တောင်းခံခဲ့ပါသည်။၃။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့စဉ်က သင်တန်းကာလကို ရက်သတ္တပတ် (၅)ပတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စ၍ယနေ့ အထိ သင်တန်းကာလကို (၄)ပတ်ဖြင့် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၄။ ပြင်ပယာဉ်မောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ ယနေ့အထိ သင်တန်းကြေး ကောက်ခံသည့် နှုန်းထားများမှာ နှစ်အလိုက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က) ၁၉၉၃ ခုနှစ် - ၃၅၀၀ိ/- နှုန်း( ခ) ၁၉၉၆ ခုနှစ် - ၄၅၀၀ိ/- နှုန်း( ဂ) ၁၉၉၈ ခုနှစ် - ၆၀၀၀ိ/- နှုန်း(ဃ) ၂၀၀၀ ခုနှစ် - ၇၀၀၀ိ/- နှုန်း( င) ၂၀၀၂ ခုနှစ် - ၈၂၆၀ိ/- နှုန်း( စ) ၂၀၀၄ ခုနှစ် - ၁၀၅၀၀ိ/- နှုန်း(ဆ) ၂၀၀၅ ခုနှစ် - ၁၆၅၀၀ိ/- နှုန်း( ဇ) ၂၀၀၅ ခုနှစ် - ၂၀၀၀၀ိ/- နှုန်း( ဈ) ၂၀၀၆ ခုနှစ် - ၂၇၀၀၀ိ/- နှုန်း(ည) ၂၀၀၇ ခုနှစ် - ၂၉၅၀၀ိ/- နှုန်း( ဋ) ၂၀၀၈ ခုနှစ် - ၃၀၀၀၀ိ/- နှုန်း( ဌ) ၂၀၀၉ ခုနှစ် - ၃၅၀၀၀ိ/- နှုန်း( ဍ) ၂၀၁၀ ခုနှစ် - ၅၀၀၀၀ိ/- နှုန်း( ဎ) ၂၀၁၁ ခုနှစ် - ၆၀၅၀၀၀ိ/- နှုန်း(ဏ) ယနေ့ထိ - ၆၀၅၀၀၀ိ/- နှုန်း
၅။ ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်အလိုက်၊ ခုနှစ်အလိုက် သင်တန်းသားဦးရေများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ခုနှစ် အကြိမ် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်၁၉၉၃ (၈) ကြိမ် ၁၇၃-ဦး၁၉၉၄ (၉) ကြိမ် ၃၉၆-ဦး၁၉၉၅ (၉) ကြိမ် ၅၇၁-ဦး၁၉၉၆ (၈) ကြိမ် ၈၁၃-ဦး၁၉၉၇ (၇) ကြိမ် ၈၃၃-ဦး၁၉၉၈ (၈) ကြိမ် ၇၉၅-ဦး၁၉၉၉ (၇) ကြိမ် ၄၁၃-ဦး၂၀၀၀ (၉) ကြိမ် ၄၈၆-ဦး၂၀၀၁ (၈) ကြိမ် ၄၇၀-ဦး၂၀၀၂ (၈) ကြိမ် ၄၆၉-ဦး၂၀၀၃ (၈) ကြိမ် ၄၄၄-ဦး၂၀၀၄ (၉) ကြိမ် ၄၅၅-ဦး၂၀၀၅ (၉) ကြိမ် ၄၅၉-ဦး၂၀၀၆ (၁၀) ကြိမ် ၅၂၀-ဦး၂၀၀၇ (၁၀) ကြိမ် ၅၄၉-ဦး၂၀၀၈ (၁၀) ကြိမ် ၇၆၅-ဦး၂၀၀၉ (၁၀) ကြိမ် ၇၆၃-ဦး၂၀၁၀ (၁၀) ကြိမ် ၉၆၁-ဦး၂၀၁၁ (၁၀) ကြိမ် ၁၅၄၇-ဦး၂၀၁၂ (၁၀) ကြိမ် ၁၉၁၃-ဦး
စုစုပေါင်း ၁၃၇၉၅- ဦး
၆။ ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်းမှ 'ခ´ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်မှု အရေအတွက်မှာ (၁၃၁၉၆ -ခု) ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၇။ ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ-(က) ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တဖက်တလမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ။(ခ) ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း များကို စနစ်တကျ သိရှိလိုက်နာစေပြီးယာဉ်အန္တရာယ်၊လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်နည်းစနစ်ကို မှန်ကန်ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်တတ်စေရန်။
၈။ ပြင်ပယာဉ်မောင်းသင်တန်းကာလ၊ ရက်သတ္တပတ် (၄) ပတ်တွင်-(က) စာတွေ့ - ၄ - ရက်( ခ) လက်တွေ့ - ၁၈ - ရက်( ဂ) ဆန်းစစ် - ၁ - ရက် ပေါင်း - ၂၃ - ၇က်
၉။ ပြင်ပယာဉ်မောင်း/ ယာဉ်ပြင်သင်တန်း၏ ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က) ဦးတင်ကြည် (ကထိက) - ၁၉၉၃ - ၁၉၉၉ ထိ( ခ) ဦးမြတ်သိမ်းထွေး (ကထိက) - ၁၉၉၉ - ၂၀၀၀ ထိ( ဂ) ဦးတင်ကြည် ( ဌာနမှူး ) - ၂၀၀၁ - ၂၀၀၄ ထိ(ဃ) ဦးအုန်းလွင် ( ဌာနမှူး ) - ၂၀၀၄ - ၂၀၀၄ ထိ( င) ဦးမျိုးမြင့် ( ဌာနခွဲမှူး ) - ၂၀၀၄ - ၂၀၁၂ ထိ( စ) ဦးစန်းလွင်( ဌာနမှူး ) - ၂၀၁၂ - ယနေ့ထိ
၁၀။ပြင်ပယာဉ်မောင်း / ယာဉ်ပြင်သင်တန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့စဉ်မှ စ၍ယနေ့ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ဦးမောင်မောင်နိုင် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁/၉၃ မှ ၂၃/၉၅( ခ) ဦးအေးကျော် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၂၄/၉၅ မှ ၆၀/၀၀( ဂ) ဦးဝင်းအောင် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၆၁/၀၀ မှ ၆၉/၀၁(ဃ) ဦးသိန်းဌေး (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၇၀/၀၁ မှ ၈၈/၀၄( င) ဦးအုန်းလွင် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၈၉/၀၄ မှ ၉၄/၀၅( စ) ဦးသိန်းဆွေ (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၉၅/၀၅ မှ ၁၀၈/၀၆(ဆ) ဦးအုန်းလွင် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁၀၉/၀၆ မှ ၁၁၃/၀၇( ဇ) ဦးကျော်စိုး (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁၁၄/၀၇ မှ ၁၂၇/၀၈( ဈ) ဦးအုန်းလွင် (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁၂၈/၀၈ မှ ၁၅၀/၁၀(ည) ဦးမြတ်လင်း (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁၅၁/၁၀ မှ ၁၆၉/၁၂( ဋ) ဦးဇော်မင်းဦး (ကျောင်းအုပ်ကြီး) - ၁၇၀/၁၂ မှ ယနေ့ထိ
ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ ၀န်ထမ်းမိသားစုများတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား ( ၁ - ၁ - ၂၀၁၃ )
ကျောင်းအုပ်ကြီးမှအမှာစကားပြောကြားနေစဉ် ဒုကျောင်းအုပ်ကြီးမှ သြ၀ါဒပြောကြားနေစဉ် တက်ရောက်လာသောဝန်ထမ်းမိသားစုများ
ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ၀န်ထမ်းများ။ ၀န်ထမ်း မိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားကို (၁-၁-၂၀၁၃) ခုနှစ် နံနက်(၉း၀၀) နာရီတွင် အောင်ဆန်း ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ အခမ်း အနားတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများ မှဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း၊ ၀န်ထမ်းမိသားစုများ မှ ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း၊ နေအိမ် လိုင်းခန်းများ အတွင်း လျှပ်စစ်မီး ချွေတာနိုင်ရေး ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း၊အကြိမ်(၂၀) မြောက် စုပေါင်း မဟာ ဘုံကထိန်ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း၊ ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး မှ သြ၀ါဒ စကား ပြောကြားခြင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားခြင်း အခမ်အနားပြီး ဆုံးကြောင်းကြေငြာခြင်းတို့ကို အစီအစဉ် (၈)ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး နံနက်(၁၁း၃၀) တွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
(၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့
(၆၅)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပခြင်း
(၆၅)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ် ရေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် အားကစား ပြိုင်ပွဲများ နှင့် ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ များအား ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဗဟို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်း အားကစား ကွင်းအတွင်း ၌ (၄-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့ က ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ လွတ်လပ် ရေးနေ့အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အားကစား ပြိုင်ပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ(၂၉)မျိုး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အားကစားပြီုင်ပွဲအလိုက် ဆုရရှိ သူများအား ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီး သီးမှ ကထိကများ၊ လက်ထောက်ကထိကများမှ ဆုပေး အပ်ချီးမြှင့် ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပြခြင်းကို နံနက်(၁၁) နာရီတွင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
၁။ အမျိုးသား (အလတ်တန်း) မီတာ (၁၀၀) အပြေး ပြိုင်ပွဲ၊ မီတာ (၁၀၀) သုံးချောင်း ထောက် အပြေး ပြိုင်ပွဲ၊ ကုလားထိုင် လုပြိုင်ပွဲ၊ ၂။ အမျိုးသား (အငယ်တန်း) မုန့် စား ပြိုင်ပွဲ၊ ပူဖောင်း ဖောက်ပြိုင်ပွဲ၊ ဖိနပ် ရွေးပြိုင်ပွဲ၊ အာလူး ကောက်ပြိုင်ပွဲ၊ ကုလားထိုင် လုပြိုင်ပွဲ၃။ အမျိုးသမီး (အကြီးတန်း) လွန်ဆွဲ ပြိုင်ပွဲ၊ ပူဖောင်း ယပ်ခပ် ပြိုင်ပွဲ၊ အပ်နဖား ထိုးပြိုင်ပွဲ၊ သံပုရာ သီးဇွန်းကိုက် အပြေး ပြိုင်ပွဲ၊ ၄။ အမျိုးသမီး (အလတ်တန်း) မီတာ (၁၀၀) အပြေး ပြိုင်ပွဲ၊ ကုလား ထိုင်လု ပြိုင်ပွဲ၊ အာလူး ကောက် ပြိုင်ပွဲ၊ ၅။ အမျိုးသမီး (အငယ်တန်း) မုန့်စား ပြိုင်ပွဲ၊ ပူဖောင်း ဖောက်ပြိုင်ပွဲ၆။ မူကြို အဆင့် (ကျား၊မ) ပူဖောင်း ဖောက်ပြိုင်ပွဲ၊ မုန့်စား ပြိုင်ပွဲ၊ ဖိနပ်ရွေး ပြိုင်ပွဲ၇။ အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး (အလွတ်တန်း) သံပုံး ရိုက်ပြိုင်ပွဲ၊ ဆင်အမြီး တပ်ပြိုင်ပွဲ
ဆုရအားကစားသမားများအား ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဇော်မင်းဦးမှ ဆုချီးမြှင့်နေစဉ်
၁၉ ကြိမ်မြောက် မိသားစုဘုံကထိန်အား ၂၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လှူဒါန်းငွေစုစုပေါင်း ၁၄ သိန်းကျော် သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။
၄-၄-၂၀၁၃ ရက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းမိသားစု သက်သာချောင်ချိရေး ရန်ပုံငွေမှ မိတ္ထီလာမြို့ ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ရှိကြသော ဒုက္ခသည်များအား ရည်ရွယ်၍ အလှူငွေ သုံးသိန်းကျပ် (၃၀၀၀၀၀ိ/-) ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ထံသို့ ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ ပါကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၂၆-၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ၀န်ထမ်းများ၊ ၀န်ထမ်းမိသားစုများမှ ဒုက္ခသည်များအား ရည်စူး၍ အလှူငွေ (၂) သိန်းကျပ်အား လှူဒါန်းခဲ့ပါကြောင်း နောက်ဆက်တွဲသတင်းအဖြစ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကျောင်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် တာဝန်	ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၁။ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ပို့ဆောင် ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းတို့မှ အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများအား အောက်ပါရည်မှန်းချက် တာဝန်များကို ဦးတည်လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးလျက် ရှိပါသည်-
လုပ်ငန်းလက်စွဲပါ လုပ်နည်းစနစ်များနှင့်တိုးတက်လာသောနည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရေး လေ့ကျင့်ပေးရန်၊
ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲတတ်စေရန်နှင့် လက်ဝယ်ရှိစွမ်းအားစုများကို ထိရာက်စွာပေါင်းစပ်သုံးစွဲ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပေးရန်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေရန်နှင့်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အားသိရှိပြီးပြည်သူကောင်း ၀န်ထမ်းကောင်းဖြစ်လာစေရေး လေ့ကျင့်ပေးရန်။
၁။ သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေး (သင်တန်းစာပေ) ဌာနခွဲ
အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု (အရာရှိ)
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ အရာထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဘာသာရပ်များအား စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကွပ်ကဲရေးအဆင့်ရှိ ၀န်ထမ်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာများကို စနစ်တကျသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်။
၂။ သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေး (သင်တန်းပစ္စည်း) ဌာနခွဲ
ပစ္စည်းများကို စာရင်းနှင့်တကွထိန်းသိမ်းတတ်ရန်၊ ပျက်စီးမှုများ မဖြစ်စေရန်၊ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတတ်စေရန်။
ယာဉ်မောင်းအဆင့် (၃) သင်တန်း
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းရှိ လုပ်သားအထွေထွေနှင့် မော်တော်ယာဉ် ၀န်ထမ်းများအား ယာဉ်မောင်းနှင်နည်းနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ဆောင်နည်းတို့အား အရည်အချင်းပြည့်စုံစွာ တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပေးရန်။
ယာဉ်မောင်း အဆင့်(၃)သင်တန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။
မိမိလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် စက်သုံးဆီများကို ထိရောက်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်၍ ဌာန၏ပို့ဆောင်ရေးကို ထိရောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ယာဉ်ထိန်းများအား ASEAN SEA Game
အမီ မော်တော်ယာဉ်ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ မောင်းနှင်တတ်စေရန်နှင့် မော်တော်ယာဉ်
စက်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးဘာသာရပ်၊ အသေးစား
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း များအား နားလည်တတ်မြောက်စေရန်
မော်တော်ယာဉ်သင်တန်းဌာနခွဲမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော အထူးအခြေခံယာဉ်မောင်း(ပြည်ထဲရေး) သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား အစီအစဉ်ကို ဗဟိုပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း အောင်ဆန်း ခန်းမတွင် (၁၁-၂-၂၀၁၃)ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းသည် ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ယာဉ်ထိန်းရဲဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၄၀)ဦင်္း တက်ရောက်ကြပြီး သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ် (၇)ပတ်ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ပို့ချသော ဘာသာရပ်များအဖြစ်
(၆) မော်တော်ယာဉ်လမ်းခရီးချို့ယွင်းမှုပြုပြင်ခြင်းဘာသာရပ် တို့သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်ရှိသော ပုံဆွဲလုပ်ငန်းများကို လက်ဖြင့်ရေးဆွဲနိုင်သည့်အပြင် Auto - CAD Softwareသုံး၍
Computer ဖြင့် ရေးဆွဲနိုင်သည့် ပုံဆွဲကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းများရရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ စာရေးဝန်ထမ်းများအား ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခြေခံပညာရပ်များ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့်
e-Government အထောက်အကူပြု ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ
အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ(၃) သံလမ်း(ဥာဏ်သစ်လောင်း) သင်တန်း
အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ(၄) အလုပ်သင် (အချက်ပြ/ဆသရ)
သံလမ်း (ဥာဏ်သစ်လောင်း) လုပ်သားခေါင်း/ဇာဝီလှည့်
တွဲစစ် (မွမ်းမံ) သင်တန်း
ဒု-ရုံပိုင် (အလုပ်သင်) သင်တန်း
ဒု-လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး (ဘတစ/ လမသ) သင်တန်း
(လက်မှတ်သိမ်း/လက်မှတ်စစ်/ဘူတာစာရေး) များ၏ (ဥာဏ်သစ်လောင်း)
စက်ခေါင်းမောင်း(လက်ထောက် - ၁)(ဥာဏ်သစ်လောင်း) သင်တန်း
စက်ခေါင်းမောင်း (လ/ထ – ၂)
စက်ခေါင်းမောင်း (စစ်သည်)အထူး သင်တန်း
လ/ထအင်ဂျင်နီယာ (အလုပ်သင်) အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ(၁) (သံလမ်း/လုပ်ငန်း/တံတား/ပုံဆွဲ) သင်တန်းသားများ သတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျ သိရှိနား လည်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ၊ နည်းစနစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ ရှိစေရန်။
မြန်မာ့မီးရထား၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ နည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းမှု ရှိစေရန်။
အငယ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ (၄) အလုပ်သင် (အချက်ပြ/ဆသရ) သင်တန်းသားများ သတ်မှတ်ထားသော ပညာများ တတ်မြောက်စေရန်။
သံလမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ်များတတ်မြောက်စေရန်။ဒီဇယ်စက်ခေါင်း စက်ပြင်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံပညာရပ်များတတ်မြောက်စေရန်။ဒီဇယ်စက်ခေါင်း စက်ပြင်များအတွက် ဒီဇယ်လျှပ်စစ် စက်ခေါင်းများ၊ ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ် စက်ခေါင်းများ မွမ်းမံခြင်း၊ လမ်းခရီးချို့ယွင်းမှုပြုပြင်ခြင်း တို့ကိုသိရှိတတ်မြောက်စေရန်။စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)တွဲစစ်-ဒုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။တွဲစစ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ဒီဇယ်စက်ခေါင်း လျှပ်စစ်ပြင်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ဒု-ရုံပိုင် သင်တန်းသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ရထားထိန်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ဒု - လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး (တွဲမှတ်) များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ရုံပိုင်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာများနှင့် ပြုပြင်ထားသော လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို တတ်မြောက်စေရန်။ရထားထိန်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တတ်မြောက်စေရန်။လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး (ရထားထိန်း၊ အထူး) များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။လမ်းခွဲကိုင်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများ တတ်မြောက်စေရန်။ဘူတာစာရေးနှင့် လက်မှတ်သိမ်း သင်တန်းသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ဘူတာစာရေး၊ လက်မှတ်သိမ်း၊ လက်မှတ်စစ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပညာရပ်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော နှုန်းထား၊ နည်းစနစ်များကို တတ်မြောက်စေရန်။စက်ခေါင်းမောင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။စက်ခေါင်းမောင်းများကြောင့် မတော်တဆမှု လျော့နည်းစေရေး၊ ခေတ်နှင့်အညီဒီဇယ်စက်ခေါင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ ထိန်းသိမ်း မောင်းနှင်တတ်စေရန်။စက်ခေါင်းမောင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။တွဲရွှေ့စက်ခေါင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။ စက်ခေါင်းမောင်း လက်ထောက်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။(လ/ထ-၂) အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။စက်ခေါင်းမောင်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်။
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသော သင်တန်းများ
အလုပ်သင်စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ(အထူး)သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၂)
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သော အလုပ်သင်စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာအထူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅/၂၀၁၂)အား (၁၀-၁၂-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် သင်တန်းသား (၁၅)ဦးဖြင့် သင်တန်းကာလ ရက်သတ္တပတ်(၁၆)ပတ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာ့မီးရထားမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်သောME , BE , B.TECH, AGTI, EGTI ဘွဲ့ရများအား သင်တန်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းတွင် စာတွေ့ သင်တန်းသာမက လက်တွေ့သင်ကြားခြင်းများ။စက်ရုံကြီးများ သို့လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ စေလွှတ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သော အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၄)အလုပ်သင် အချက်ပြဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၂) အား (၆-၈-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် သင်တန်းသား (၁၀)ဦး၊ သင်တန်းကာလ ရက်သတ္တပတ်(၂၃)ပတ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ (၁၀-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် သင်တန်းဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလအတွင်း စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားခြင်းများသာမက မြန်မာ့မီးရထားဌာနရှိ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ကွင်း ဆင်း လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
စက်ခေါင်းမောင်း(တွဲရွေ့)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၂) နှင့် စက်ခေါင်းမောင်း လ/ထ-၂ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၉/၂၀၁၂) သင်တန်းဖွင့်လှစ်
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သော စက်ခေါင်းမောင်းတွဲရွေ့သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၂) သင်တန်း နှင့် စက်ခေါင်းမောင်း လက်ထောက်(၂) သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၂) သင်တန်းများ အား (၇-၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့မီးရထားမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်သော စက်ခေါင်း မောင်းတွဲရွေ့ သင်တန်းသား (၃၀)ဦး နှင့် စက်ခေါင်းမောင်း လက်ထောက်(၂) သင်တန်းသား (၂၅)ဦး စုစုပေါင်း (၅၅)ဦးဖြင့် သင်တန်းနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းများ တက်ရောက်သင်ကြားရန် သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်ကြာမြင့် မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း စက်ခေါင်းမောင်း နှင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအား စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ အဖြစ်မြန်မာ့မီးရထားတွဲရွေ့လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊မြို့ဟောင်း၊မလွှကုန်း ယာဒ်ဝင်းများသို့လည်း သွားရောက်လေ့ကျင့် သင်ကြားကြမည်ဖြစ်သည်။အဆိုပါ စက်ခေါင်းမောင်း (တွဲရွေ့) သင်တန်း နှင့် စက်ခေါင်းမောင်း လက်ထောက်(၂) သင်တန်းတို့မှာ အနေဖြင့် (၂၉-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင်သင်တန်းဆင်းကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ခေါင်းမောင်းနှင်ခွင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၀/၂၀၁၂)သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သော စက်ခေါင်းမောင်းနှင်ခွင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၀/၂၀၁၂) သင်တန်းအား (၂၇-၉-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့မီးရထားမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်သော သင်တန်းသား (၂၄)ဦးဖြင့် ရက်သတ္တပတ်(၂၀)ကြာဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း ဆင်းပွဲအား (၁၁-၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သာမန်အထက်(၁၁)ဦး ၊သာမန်အမြင့်(၁၃) ရရှိပြီး သင်တန်း တစ်ခုလုံး အနေဖြင့် သာမန် အမြင့် ဖြင့် သင်တန်းဆင်းသွားကြပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ သင်တန်းဆင်း အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ် များအား ဌာနမှူးမှ ပေးအပ်ခြင်း၊ သင်တန်းတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရှိသူများအား ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ဆုပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားပြီးဆုံးခြင်းစသော အစီအစဉ် (၄)ရပ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပြီး နံနက် (၉း၃၀) မိနစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသော ဒီဇယ်စက်ခေါင်းလျှပ်စစ်ပြင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၁/၂၀၁၂) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား ၂၀၁၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းအောင်ဆန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ သင်တန်းဆင်းစကားပြောကြားရာ၌ ယနေ့သည် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ပြင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၂)၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ ယခုသင်တန်းအား (၁၅-၁၀-၂၀၁၂ )နေ့တွင် သင်တန်းသား (၁၀)ဦးဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် သင်တန်းသား အားလုံးသင်တန်း ကိုအောင်မြင်စွာဖြင့် ဆင်းသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းတွင် သာမန်အမြင့်(၇)ဦး ၊သာမန်(၃)ဦး၊သင်တန်း တစ်ခုလုံး၏ ပျမ်းမျှရမှတ်(၇၁.၃၄)ဖြစ်ပြီး သင်တန်းအား သာမန်အမြင့်အဆင့်ဖြင့် သင်တန်းဆင်း ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် အောင်မြင်သော သင်တန်း တစ် ခုဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းဆင်း ရလာဒ်များအား ကျောင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သင် တန်းသားများ၏ မိခင်ဌာနများသို့ လည်း ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်း အကဲဖြတ် အမှတ်များအား သတ်မှတ်ရာတွင် ကျောင်းမှချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ကို သင်ကြားပို့ချလိုက်သော အသိပညာများကို အသုံးချပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ပိုမို ကောင်းမွန် အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းမှ သင်ကြားပို့ချလိုက်သော စာတွေ့ ၊လက်တွေ့သင်ခန်းစာများကိုလည်း ဆက်လက် ဆည်းပူးလေ့လာရသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ မိမိသိရှိထားသော အသိပညာ၊အတတ်ပညာများကိုလည်း မိမိ ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်း တဆင့်ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် မိမိ၏ဌာန အတွက်လည်ကောင်း၊ မိမိ၏တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် သင်တန်းသားများသည် နိုင်ငံ ၀န်ထမ်းများဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၀န်ထမ်းကောင်းတို့လိုက်နာကြရမည့် အချက်(၄)ချက်ဖြစ်သည့်သစ္စာစောင့်သိခြင်း အမိန့်နာ ခံတတ်ခြင်း ၊ပေးအပ်သော တာဝန်များ ကိုကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း ကွပ်ကဲမှုအနည်းဆုံးနှင့် လုပ် ငန်းပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊စသည့်အချက်များနှင့်ပြည့်စံရန် လိုအပ်ကြောင်း၊နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ပြော လိုသည်မှာ စိတ်ကောင်း ၊စေတနာကောင်းထား ရှိရန်နှင့် ပြည်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် သည်းခံစိတ်ရှည်ပြီး မိမိဌာန တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း၊ စည်းကမ်းလိုက်နာသော ၀န်ထမ်းကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပြီး မိမိကို သင်ကြားပေး လိုက်သော ပညာများကို ပိုမိကျွမ်းကျင်အောင်ဆည်းပူးပြီး ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သော ၀န်ထမ်းကောင်း တစ်ဦး၊ တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးပြုနိုင်သော လူကောင်း လူတော် များဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားကြရန်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် သင်တန်းသားများအား ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးမှ သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်များပေးအပ်မြှင့်ပါခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သင်တန်းတွင် ထူး ချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ကြသော ပထမ ၊ဒုတိယ၊ တတိယရရှိသည့် သင်တန်းသားများအား ဆုတံဆိပ်များကို ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရာ ပထမဆုအား ကသ-၈ ဦးနိုင်နိုင်ထွန်း (တိုင်း-၂၊ရွာထောင်)မှလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုအား ကသ-၁ ဦးကျော်ကျော်မိုး (တိုင်း၎၊သာစည်)မှလည်းကောင်း ၊တတိယဆုအား ကသ-၉ ဦးလှမျိုးအောင် (တိုင်း-၇၊အင်းစိန်)မှလည်းကောင်း အသီးသီးရရှိကြပါသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားအား နံနက်(၉)နာရီ (၃၀)မိနစ် တွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ရထားသင်တန်းဌာနခွဲမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပြီးသော သင်တန်းများ
Auto Coupler Maintenance
Traction Motor Maintenance
Air Con: Maintenance
မိတ္ထီလာ၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၈)ရက်
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း(မိတ္ထီလာ) တွင် ၀န်ထမ်း/မိသားစုများအား မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး ဟောပြောပွဲနှင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြမီးငြိမ်းသတ်ခြင်းတို့ကို ဇန်န၀ါရီလ (၂၅) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁) နာရီတွင် ကျင်းပြပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ဆန်းမှ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဟောပြောခဲ့သည့်အပြင် မီးသတ်ဆေးဗူးများဖြင့် လက်တွေ့ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြသခဲ့ရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ၀န်ထမ်း/မိသားစု (၁၅၅) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
နောက်ခံသမိုင်း	ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့ ဆောင်းပါးများ / ကာတွန်းများ / အားကစား / တင်ဒါများ။
ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းကို ယခင်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက် သင်တန်း ကျောင်းအဖြစ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်းနေရာ၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့၌ မိတ္ထီလာမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ၊ ရထားဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခဲ့သည်။၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ(၂၉)ရက်နေ့တွင် ယခင်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန၊ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီး ဌာန(၃)ခုအဖြစ်ခွဲခြားပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာဗဟိုပို့ဆာင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း သည် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၉-၁-၁၉၉၂ ရက်နေ့မှစ၍ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများမပါဝင်တော့ဘဲ ရထားဆိုင်ရာသင်တန်းများ ကိုသာပို့ချခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်မှစ၍ ဂဟေအခြေခံ၊လျှပ်စစ်အခြေခံနှင့်စက်ဆင်အခြေခံသင်တန်းတို့ကို မြန်မာ့မီးရထားဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံရှိRail Transportations Training Center (RTTC) ကျောင်း၌ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲသည့်အတွက် ဤကျောင်းစက်မှုလက်မှုသင်တန်းဌာနခွဲမှသင်တန်းအားလုံး ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်း ခြင်း မရှိတော့ပါ။ထို့အတူကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးမှလည်း ယာဉ်ပြင်သင်တန်းသားများပေးပို့ခြင်းမရှိ တော့သည့်အတွက် ယင်းသင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။လက်ရှိတွင် ရထားဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုသာ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။
၁။ ၀၅း၀၀ - အိပ်ယာထချိန်၂။ ၀၅း၃၀ - ၀၆း၃၀ - နံနက်ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ချိန်၃။ ၀၇း၃၀ - တန်းစီချိန် (သင်တန်းသွား)၄။ ၀၈း၀၀ - ၀၈း၄၀ - ပထမအချိန်၅။ ၀၈း၄၅ - ၀၉း၂၅ - ဒုတိယအချိန်၆။ ၀၉း၃၅ - ၁၀း၁၅ - တတိယအချိန်၇။ ၁၀း၂၀ - ၁၁း၀၀ - စတုတ္ထအချိန်၈။ ၁၁း၀၀ - ၁၂း၃၀ - နေလည်စာ စားချိန်၉။ ၁၂း၃၀ - ၁၃း၁၀ - ပဉ္စမအချိန်၁၀။ ၁၃း၁၅ - ၁၃း၅၅ - ဆဌမအချိန်၁၁။ ၁၄း၀၅ - ၁၄း၄၅ - သတ္တမအချိန်၁၂။ ၁၄း၅၀ - ၁၅း၅၀ - အဌမအချိန်၁၃။ ၁၆း၀၀ - ၁၇း၀၀ - အားကစား + သန့်ရှင်းရေး၁၄။ ၁၇း၃၀ - ၁၈း၃၀ - ညစာ စားချိန်၁၅။ ၁၉း၀၀ - ၂၀း၃၀ - ညစာကြည့်ချိန်/ ညလေ့ကျင့်ခန်း၁၆။ ၂၀း၃၀ - မီးပိတ် / ညအိပ်ချိန်
ပထမပတ်၁။ တနင်္လာ - ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးတန်းစီ စစ်ဆေးခြင်း (နည်းပြ+သင်တန်းသားများ)၂။ အင်္ဂါ - ကျောင်းအုပ်ကြီး အိပ်ဆောင်များစစ်ဆေးခြင်း၃။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ - ဌာနခွဲ ကထိကများ အိပ်ဆောင်စစ်ဆေးခြင်း၎။ သောကြာ - ဌာနမှူး တန်းစီစစ်ဆေးခြင်း (၀န်ထမ်းများ)
ဒုတိယပတ်၁။ တနင်္လာ - ကထိက (စာပေ)တန်းစီ စစ်ဆေးခြင်း (နည်းပြ+သင်တန်းသားများ)၂။ အင်္ဂါ - ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး အိပ်ဆောင်များစစ်ဆေးခြင်း၃။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ - ဌာနခွဲ ကထိကများ အိပ်ဆောင်စစ်ဆေးခြင်း၎။ သောကြာ - ဌာနမှူး တန်းစီစစ်ဆေးခြင်း (၀န်ထမ်းများ) တတိယပတ်၁။ တနင်္လာ - ကထိက (စာပေ)တန်းစီ စစ်ဆေးခြင်း (နည်းပြ+သင်တန်းသားများ)၂။ အင်္ဂါ - ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး အိပ်ဆောင်များစစ်ဆေးခြင်း၃။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ - ဌာနခွဲ ကထိကများ အိပ်ဆောင်စစ်ဆေးခြင်း၎။ သောကြာ - ဌာနမှူး တန်းစီစစ်ဆေးခြင်း (၀န်ထမ်းများ)
စတုတ္ထပတ်၁။ တနင်္လာ - ကထိက (စာပေ)တန်းစီ စစ်ဆေးခြင်း (နည်းပြ+သင်တန်းသားများ)၂။ အင်္ဂါ - ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး အိပ်ဆောင်များစစ်ဆေးခြင်း၃။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ - ဌာနခွဲ ကထိကများ အိပ်ဆောင်စစ်ဆေးခြင်း၎။ သောကြာ - ကျောင်းအုပ်ကြီး စစ်ရေးပြ(၀န်ထမ်းများ+နည်းပြများအားလုံး)
ကျောင်းအုပ်ကြီးမှဝတ်စားဆင်ယင်မှုစစ်ဆေးစဉ် ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုထူးချွန်ဆုရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဆုချီးမြှင့်နေစဉ်
ဌာနမှူးမှ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုထူးချွန်ဆုရ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဆုချီးမြှင့်နေစဉ်
သင်ကြားလေ့ကျင့်ရေးသရုပ်ပြဆောင်များနှင့် အလုပ်ရုံများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဇော်မင်းဦနှင့်၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမြတ်လင်း တို့သည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါပြီး (၁၉-၁၂-၂၀၁၂) နေ့ တွင် ကျောင်းရှိ ဌာနအသီးသီး၏ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ သရုပ်ပြဆောင်များနှင့် အလုပ်ရုံများအား စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ကြပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။
© 2009 Ministry of Rail Transportation. All rights reserved.	ကြေငြာချက်များ